Qaran24 – Page 3 – Kala Soco Warar Sugan 24'ka Saac
War Deg Deg Ah:- Raysal Wasaaraha cusub ee Ethiopia oo Goordhow lagu dhawaaqayo! Waa kuma ninka ugu cad cad?
Gollaha wasiirada ee Isbahaysiga xukuma wadanka ethiopia ee EPRDF ayaa la filayaa inay maalinta beri ee Jimcaha doortaan ninka bedeli doona ra’isul wasaarihii hore ee Ethiopia Hailemariam oo maanta iscasilay.
Saddex nin ayaa loo badinaya in midkood la doorto, Wasiirka arrimaha dibada ee Ethiopia Workneh Gebeyehu oo ka soo jeeda Qowmiyada Oromada.
Ku-xigeenka ra’isul Wasaaraha Ethiopia Demeke Mekonnen oo ka soo jeeda qowmiyada Axmaarada iyo Lema Megersa oo ah madaxweynaha Ismaamul goboleedka Oromiya oo ahayd degaanka tiir dhexaadka u ahayd kacdoonka looga soo horjeedo maamulka federaalka Ethiopia.
Haddii ra’isul wasaaraha ethiopia loo doorto siyaasi ka soo jeeda Qowmiyada Oromada oo tiro ahaan ugu badan dalkaasi, waxay noqonaysaa markii u horraysay ay qabtaan jagada wadanka ugu awooda badan.
Hase yeeshee waxaa laga cabsi qabaa in arrintaasi dhaliso in Qowmiyadaha Tigreega iyo Soomaalidu ay ku dhawaaqaan madaxbanaani…
NB: Xiriirka Soomaalidu iyo Oromadu wuxuu marayaa meeshii u hoosaysay muddo 200 sanno ku dhow… sidoo kale xiriirka Axmaarada iyo tikreegu ma wanaagsana..
Aragtidiina ka dhiibta, Maxay idiinla tahay, haddii Ra’isul Wasaare ka soo jeeda Oromiya la doorto?, Muxuu noqonaya xiriirka Soomaalida iyo ethiopia?
War Deg Deg Ah: Guddigii dhisay dekeda macmalka ah ee Bosaso oo ku dhawaaqay war ka caraysiindoona DP-World iyo Sheikh Fu’aad Aflow oo sheegay inay canshuurayaan hantida Dooonta saaran.
Warbixin laga diyaariyey caawa gurmadka loo fidinayo doonta iyo shaqada habeenkii xitaa socota ayaa lagu wareystay Shiikh Fu’aad Aflow oo hogaamiye u ah howgalka gurmadka.
Markuu sheegay inuu guddoomiye u yahay howsha socota, ayaa la weydiiyey cidda u dooratay? Wuxu sheegay in ganacsatadii Ku tashatay badbaadinta doonta ay guddi sameeyeen sidaasina isaga Ku doorteen.
Doonta waxaa saaran kharash ahaan waxaa hore loogu sheegay qiime aan fadhin, mar waxa la yiri $9Millon mar $7Million, Shiikh Fu’aadna wuxuu sheegay.”waxaa saaran doonta $8.5Millon badeeco gaaraysa”.
Waxa ugu badan ee saaran waa gawaari illaa 50gaari, celcelis ahaan midkii hadii uu $5000 yahay waa $250,000 raashiinka iyo bagaashka kale miyaa dhowr Million ah? ayaa mar kale la weydiiyay Sheikh Fu’aad.
Shiikhu wuxuu aqbalay cadadka gaadiidka iyo qiimahiisa balse wuxu raaciyey in raashin badana saaranyahay, wuxuu intaasi ku daray in qoraal lagu soo rarray doonta ay ka qiyaaas qaateen.
Cashuurta Dowladdu ka dhaaftay doonta caariday ayuu soodhoweeyay Shiikh Fu’aad, kadibna waxaa la weydiiyey idinku ma kharash baa ka qaadeysaan?
Wuxuu sheegay in kharash badan galay gurmadka iyo meesha la dhisay, kharashkaasi oo loo saaray guddi qiimeeya, sidaasi darteed ay jiri doonto wax laga qaadayo badeecada saaran doonta.
Sowmahan inaa idinku cashuureysaan? Ayuu mar kale weriyuhu weydiiyeey. Wuxuu dhahay maya ma cashuureyno ee iyaga ganacsatadu wax uun sameyn doona maadaama howlbadan la galay.
Mustaqbalka dekadda macmalka ah waxaa uu shiikhu ii sheegay in looga faa’ideysanayo siyaabo badan sida meel dalxiis, meel kalluumaysatadu isticmaasho,
wuxuu isheegay inaysan macquul aheyn in la baab’iyo meesha kharashka la geliyey ee Habeen iyo maalin la dhisayey.
9 cisho oo habeen iyo maalin la shaqeynayey ka dib waxaa reer Boosaaso sugayaan beri inta qoraxdu kasoo baxayso si Doonta loogu billaabo dejinta alaabta.